Purism's Librem 5 inozotakura neGNOME 3.32 nharaunda | Linux Vakapindwa muropa
GNOME mushambadzi Adrien Plazas akazivisa nhasi kuti Purism iri kuuya yeLibrem 5 Linux foni ichaendesa neGNOME 3.32 giraidhi yemamiriro nekutadza.
GNOME 3.32 ichangobva kupinda muchikamu chekusimudzira uye ichave yekuvandudza kukuru kune yakakurumbira graphical nharaunda mune dzakasiyana siyana dzeLinux. Zuva raro rekuburitsa ndiKurume 13, 2019 uye izvozvi zvakasimbiswa kuti chichava chinongedzo chakasarudzika cheLibrem 5.
Ndokusaka mushambadzi achikoka GNOME uye GTK + vashanduri vekushandisa kuti vagadzirise maapplication avo kuti ashande pane ese maLinux kugoverwa uye Librem 5, iyo inoshandisa chengetedzo-yakatarisana uye kugoverwa kwakavakirwa paDebian.
Mazhinji mashandisirwo, anosanganisira GNOME Podcast, Chatty, Mafoni uye Fractal, akatogadziriswa kuti ashande muLibrem 5, uye mamwe manyorerwo anozogadziriswa munguva pfupi iri kutevera, pakati pazvo patinoona GNOME Kutaurirana, Mitambo yeGNOME, Zvimiro zveGNOME uye Geary.
Librem 5 neGNOME 3.32 inobuda muna Kubvumbi 2019
Purism yakazivisa kunonoka kweLibrem 5 kusvika muna Kubvumbi 2019 nekuda kwekutadza kweminiti yekupedzisira, asi shanduko yemusi yanga yakanaka kuwedzera GNOME 3.32, vhezheni inosvika pakati paKurume, ingori nguva yeLibrem 5.
Sezvo Purism yakambotaurwa, Librem 5 ichashandisa shanduko yeGNOME Shell mushandisi interface yakashandisirwa iyo 5.5-inch skrini, iyi shanduko ichadaidzwa kunzi GNOME nharembozha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Purism's Librem 5 inozotakura neGNOME 3.32 nharaunda
pachave nemukana wekuti mumwe anogona
odha michina yeimwe nyika painobuda?
inotaridzika kunge inonakidza kwazvo.
Rogelio, ndakachikumbira kwemwedzi mishoma, ndinokurudzira kuti uiraire nekukurumidza sezvazvinogona, zvingangoita kuti nhasi wave mune yechina kana yechishanu wave yekuendesa (yambira) uye zvakanyanya kuti ungangoenda kusvika 2019, ndinovimba ndinoibata muQ1 2019
Pindura ku / root/.~bashrc
Yakanga isiri kuuya nePlasma Mobile? Kuodza mwoyo kwakadini!
VyOS: yakanakisa yakavhurwa sosi network inoshanda sisitimu
AV Linux: distro yakanangana nekugadzira zvemultimedia zvemukati